အမေးအဖြေများ - ရောင်းမည် Display ကို Co. , Ltd မှ၏ Ningbo WEDAC ပွိုင့်
ငါ display ကိုသာတချို့ရုပ်ပုံများရှိသည်, သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကိုးကားပေးနိုင်သလော မရလျှင်သင်သည်အခြားဘယ်အရာကိုမလိုအပ်ရမလဲ
တောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော့်ကိုပုံပေါ်အခြေခံပြီးကိုးကားနိုင်ဘူးအနည်းဆုံးကျနော်တို့က၎င်း၏အသုံးပြုမှုများအတွက်ပစ္စည်း, အရေအတွက်လိုအပ်သော, ဖော်ပြချက်များနှင့်ပြသရန်လိုအပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏သတင်းအချက်အလက်များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီဖွဲ့စည်းမှု, အထူနှင့်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များအတွက်တိုင်းတာခြင်းလိုအပ်ပါတယ်။
တတ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်အဖြစ် ok ပေမယ့်ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်အထိမ်းအမှတ်ကျေးဇူးပြုပြီး: အတိုင်းတာခြင်း and explanation, thickness and quality requirements for the material, quantity required,the description for its usage, and the information of the product which need to be displayed.
ok, ဒါပေမယ့်တတ်နိုင်သမျှအသေးစိတ်အဖြစ်ဆက်စပ်သတင်းအချက်အလက်ကိုသတိပြုပါကျေးဇူးပြုပြီး: အတိုင်းတာခြင်း, ပစ္စည်းများအတွက်အထူနှင့်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များ, အရေအတွက်လိုအပ်သော၎င်း၏အသုံးပြုမှုများအတွက်ဖော်ပြချက်များနှင့်ပြသရန်လိုအပ်သည့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏သတင်းအချက်အလက်များ
ဒါကအကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်, အောက်ပါသတင်းအချက်အလက်များကိုမရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်လျှင်, စုံလင်သောဖွစျလိမျ့မညျ:
တစ်စုံတစ်ရာတံဆိပ်, ဂရပ်ဖစ်ထည့်သွင်း / စက္ကူ, decal သို့မဟုတ်ပုံနှိပ်လျှောက်ထားလျှင်အနုပညာလက်ရာ။
silkscreen ပုံနှိပ်ခြင်းအဘို့အ Pantone အရောင်အရေအတွက်ကို။
ကျွန်မစိတ်ကြိုက်ခံရဖို့တစ် display ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ငါသည်အဘယ်သို့ပေးသင့်သလဲ
သင်တစ်ဦးစိတ်ကြိုက်ခင်းကျင်းပြသယူနစ်လိုအပ်ပါလျှင်အောက်ပါများကို ကျေးဇူးပြု. :
အဆိုပါအရေအတွက် 1. ဖြစ်နိုင်သည်သင့်ရဲ့ကနဦးအမိန့်၏။
2. နည်းပညာဆိုင်ရာရေးဆွဲတဲ့ပြည့်စုံတစ်စုံကျွန်တော်တို့ရဲ့ quotation အ, ထုတ်လုပ်မှုသို့မဟုတ်သင့်လိုအပ်ချက်များကိုနားလည်ခြင်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။
3. သင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပုံဆွဲရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဆိုရငျ, ဝေဖန်အရွယ်အစားနှင့်ရှင်းပြချက်နှင့်အတူတစ်ဦးအယူအဆ (ဒီဇိုင်း) အကျိုးသက်ရောက်မှု၏ပုံဆွဲ (သို့မဟုတ်ပင်ပုံကြမ်း) လုပ်ကိုင်နိုင်သောဖြစ်လိမ့်မည်။
4. display ကိုယူနစ်အတွက်ပြသခံရဖို့သင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို: Shape, အရွယ်အစား, အလေးချိန်, ပစ္စည်း, ရုပ်ပုံစသည်တို့ကိုကျနော်တို့ဒီဇိုင်းဖို့လိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ / ထုတ်ကုန်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အခြေခံ. display ကိုစမ်းသပ်ရန်၏နမူနာများအပြည့်အဝထား ငါတို့သည်သင်တို့တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းနမူနာတင်ပြမီသင့်ထုတ်ကုန်ပြသမှုယူနစ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။
5. သင့်ရဲ့ Display ကိုစင်ပေါ်ပေါ်တွင်တင်ခံရဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်ကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း၏အသေးစိတျပေးကျေးဇူးပြုပြီး: Shape, အရွယ်အစား, ကရိယာများအတွက်အပေါက်တည်နေရာ, ပစ္စည်း, ရုပ်ပုံစသည်တို့ကို
အဘယ်အရာကိုသတင်းအချက်အလက်တစ် quotation အဘို့အလိုသည်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အခြေခံလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်ကိုဖွင့်မယ့် quotation အများအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်ရမလဲ
ပစ္စည်းများအတွက် 2. အထူနှင့်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များ,
3. Finish ကို
4. Installing ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို
7. Pack အသေးစိတ်ကို
8. အနုပညာလက်ရာမည်သည့်တံဆိပ်, ဂရပ်ဖစ်ထည့်သွင်း / စက္ကူ, decal သို့မဟုတ်ပုံနှိပ်လျှောက်ထားလျှင်။
9. ဖောက်သည်အခြေခံသတင်းအချက်အလက်, အဆက်အသွယ်
ဘယ်လိုမကြာမီငါစျေးနှုန်း (quotation အ) ရနိုင်မလဲ?
1. အသေးစိတ်ရေးဆွဲပေးနေတယ်ဆိုရင်, ဒါမှမဟုတ်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များအားလုံး quotation အများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ , များသောအားဖြင့်ကျနော်တို့2ရက်အတွင်းစျေးနှုန်းပေးနိုင်ကြောင်း, အလုပ်၏အမှန်တကယ်အခြေအနေအရသိရသည်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း quotation အပေးပါလိမ့်မယ်။
(အသေးစိတျ, ဒါမှမဟုတ်ဟောင်းအလုပ်စျေးနှုန်းထုပ်ပိုးမပါဘဲ) အခြေခံပညာစျေးနှုန်းရှိရာသို့အလျင်အမြန် provider ကဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
(ထုပ်ပိုးအသေးစိတ်အလေးချိန်, နမူနာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုစသည်တို့ကိုဘို့ခဲအချိန်နှင့်အတူ) အပြီးအစီးစျေးနှုန်းအတော်လေးရှည်အချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။
2. ပြန်ကြားရေး quotation အရေးဆွဲ,3ရက်အတွင်းကိုးကားခြင်းမရှိဘဲလုပ်နိုင်ပြီးပြည့်စုံသည်မဟုတ်။
3. ပုံမှန်အားဖြင့်ကိုးကားပေးရ 1 အပတ်ကလိုအပ်တယ်, ပထမဦးဆုံးဒီဇိုင်းလုပ်ဖို့လိုပြီးတော့ quotation အပေး ။ အလုပ်၏အမှန်တကယ်အခြေအနေအရသိရသည်ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်း quotation အပေးပါလိမ့်မယ်။
acrylic Display, display ကိုရပ်တည်ချက်, display ကိုကက်ဘိနက်, အလှကုန် Display, ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်း pusher, PC ကိုထုတ်ကုန် PETG ထုတ်ကုန်စသည်တို့ကို
ပလပ်စတစ် Display, Injection ထုတ်ကုန်, PVC extrusion, PVC ကိုင်ဆောင်သူ, သစ်သား Display, သတ္တု display ကိုစသည်တို့ကို
WEDAC ထုတ်လုပ်မှု၏ MOQ ကဘာလဲ?
Clear ကို acrylic display: 100pcs
ရောင်စုံ acrylic display: 500kgs
စာရွက်သတ္တု display ကိုရပ်တည်ချက်: 100pcs
ထိုးသွင်းပလပ်စတစ် display: 1000pcs
1. အထွေထွေထုပ်ပိုး: 1pc / PE အိတ် / အတွင်းစိတ် box ကိုတော်တော်များများ PCs / ပုံး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအတွင်းစိတ် box ထဲမှာအများအပြား PCs, ထို့နောက် N ကိုသေတ္တာတစ်ဦးစက္ဏူထူအတွက် ..
2. အစုလိုက်ထုပ်ပိုး: အချို့ infilling နှင့်အတူတစ်ဦးစက္ဏူထူများတွင် N ကို PCs ။
option ကိုများအတွက်စသည်တို့ကို 3. Honeycomb စက္ဏူထူ, သစ်သားသေတ္တာ, သစ်သားအမှုပေါင်း, ရေမြှုပ်ကာကွယ်, သစ်သား pallets, ပလပ်စတစ် pallets ။
1. T ကသိုက်အဖြစ်ကြိုတင် / T က 50%, နှင့် B / L ကို၏မိတ္တူပြီးနောက်ဟန်ချက်။
မျက်မှောက်အချိန်တွင် 2. LC
အသေးစိတ်အခွအေနေနှုန်းအဖြစ်ဆွေးနွေးအကဲဖြတ်ခံရဖို့ 3. အခြားပေးချေမှုနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
နမူနာများနှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုခဲအချိန်: နမူနာ 3-15 ရက်, Mass ထုတ်လုပ်မှု 15-50 ရက်။
တစ်ဦး quotation အများ၏သက်တမ်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်စွဲ: အများအားဖြင့်သာရက်ပေါင်း 30 အတွင်း။
Value ကို> 10 ဒေါ်လာ, နမူနာကုန်ကျစရိတ် = ယူနစ်စျေးနှုန်း x ကို3+ ဆက်သားတာဝန်ခံဝယ်အားဖြင့်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်သင့်သည်။
ဝယ်သောသူ T / T, paypal, အနောက်ပြည်ထောင်စု, moneygram, & နမူနာကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ငွေပေးချေမှုစေရန်မည်သည့်လမ်းကိုသုံးနိုင်သည်။
ဟုတ်ကဲ့, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်တို့ယုတ်ညံ့ပစ္စည်းများကိုသုံးပါသို့မဟုတ်ထောင့်ဖြတ်ခွဲစံကုန်ပစ္စည်းများထုတ်ကိုဖွင့်ဘယ်တော့မှဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စျေးနှုန်းအချို့အခြားသူများထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ကုန်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်၏အရည်အသွေးလျှော့ချဘယ်တော့မှကျနော်တို့ချင်ကြပါဘူး မကောင်းတဲ့ထုတ်ကုန်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏စျေးကွက်လုယူကျွန်တော်တို့ရဲ့ client ကိုနှင့်ကိုနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအနေဖြင့်အတူတကွအကြိုးခံစားနိုင်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်, သေချာသည်အရည်အတွက်ပါလျှင်။ , spec ။ သို့မဟုတ်အသုံးအနှုန်းများ & အခြေအနေများစသည်တို့ကိုချိန်ညှိပါလိမ့်မည်, ဒါမှမဟုတ်လုံလောက်သောနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်နားလည်မှုထူထောင်ဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့သည်သင်တို့စက်ရုံထဲကနေဓါတ်ပုံတွေနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုအခွအေနေကို update ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုတက်အတိုင်းလိုက်နာနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေး, အရာအားလုံးသင့်ရဲ့အရည်အသွေးကိုစံတွေ့ဆုံရန်သေချာဖြစ်စေလျက်, ကုန်စည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံစွန့်ခွာမတိုင်မီမှားယွင်းတဲ့ဘာမှမရှိဘူးင်သေချာအောင်မည်! ...... သင် (ပင်လယ်သို့မဟုတ်လေယာဉ်ဖြင့်) ကိုထုတ်လုပ်မှုအချိန်ပြီးနောက်အမိန့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ (အမိန့်တွင်ဖော်ပြထား) နှင့်ရေကြောင်းအချိန်လက်ခံရရှိရန်မြျှောလငျ့နိုငျသ။
သငျသညျထားရှိနိုင်ရန်ပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ကိုရုပ်ပုံများနှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုအခွအေနေကို update လိမ့်မည်နည်း
ဟုတ်ပါတယ်, သေချာ။ ကျနော်တို့ထုတ်လုပ်မှု၏လုပ်ငန်းစဉ်တက်အတိုင်းလိုက်နာနှငျ့သငျ updated စောင့်ရှောက်မည်။
ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ထုပ်ပိုးသည့်ကုန်ကြမ်း, Semi-ထုတ်ကုန်, ချောထုတ်ကုန်, အဖြစ်, သူတို့ကအရာအားလုံးနှင့်နေ့စဉ်စစ်ဆေးခြင်းသည်ထုတ်ကုန်အရေးပါသောအဆင့်မှာကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်ပါလိမ့်မည်,3QCs ရှိတယ် ..
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောသင်္ဘောအေးဂျင့် & ပေးပို့ခဲ့သည်ဟုရှိသည်, သူတို့ကအမြဲတမ်းလုံခြုံစိတ်ချစွာသင့်ရဲ့ဆိပ်ကမ်းများဖို့ကုန်ပစ္စည်းများကယ်မနှုတ်နိုင်။
ကျနော်တို့ FOB ပြုလျှင်သင်သည်သတ်မှတ်ထားသောပေးပို့ခဲ့သည်ဟုကိုလက်ခံသလဲ?
ဟုတ်ကဲ့, ဒါပေမယ့်ထပ်ဆင့်ပို့ရန်ကျွန်တော်သူတို့နှင့်အတူအာကာသစာအုပ်ဆိုင်မတိုင်မီအမှု၌ထပ်ဆင့်ပို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုသို့မဟုတ်ကျွန်တော်အပေါ်မိုတာဝန်ခံသူတို့နှင့်အတူပြဿနာများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်, ကျွန်တော်တစ်ဦးကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဦးတည်းမှပြောင်းလဲပစ်ရန်ကိုတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိသည်, အရမ်းကျွန်တော်တို့ကိုအတည်ပြုခံရဖို့လိုအပ်တယ်, ဒါမှမဟုတ်အကြံပြု သင်တို့အဘို့အထိုကဲ့သို့သောတဦးတည်း။
ယေဘုယျအားဖြင့်ကျနော်တို့ကဝယ်မဆိုအခြားစာရွက်စာတမ်းများလိုအပ်တယ်ဆိုရင်, ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုတင်သိစေပါ, ရေကြောင်းစာရွက်စာတမ်းများအဖြစ် lading စာရင်းနှင့်ဥပဒေကြမ်းထုပ်ပိုး, ငွေတောင်းခံလွှာကိုပေးလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ငွေကြေးများ၏ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုများနှင့်ထပ်အမိန့်ကိုလက်ခံရရှိပေါ်မှာပစ္စည်း / အလုပ်သမားကုန်ကျစရိတ်အပေါ်အခြေခံပြီးစျေးနှုန်းပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်အညီအဆိုပါညှိနှိုင်းမှုစေမည်။
သငျသညျစက်ရုံ / ထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ်ရုံကုန်သွယ်ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါသလား
စက်ရုံအတွက် 25 လုပ်သားများရှိပါတယ်ပါပဲ။
လက်ရှိတွင် display ကိုထုတ်လုပ်မှုများအတွက် USD500000 အကြောင်း, ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်လျင်မြန်စွာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်တိုးချဲ့နိုင်ပါတယ်။
တစ်နှစ်လျှင် USD3 သန်းနဲ့ချီ။
အဘယ်ကြောင့် acrylic display ကိုရှေးခယျြ?
ကမ္ဘာ့ဖလားအမှတ်တရⅡ 1939-1945 ကာလအတွင်း 1. တစ်ဦးကိုအထူး plexiglass အဖြစ်, acrylic ပထမကျယ်ပြန့်စစ်လေယာဉ်များနှင့်တင့်ကားအဘို့ကားရှေ့မှနျအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်၎င်း၏ service ကိုဘဝထက်ပိုမို 10 နှစ်ပြင်းထန်ပတ်ဝန်းကျင်အောက်မှာဖြစ်ခဲ့သည်။
2. acrylic င့်လင်းမြင်သာတဲ့မြင့်သောဘွဲ့ရှိပါတယ်, နဲ့အလင်းဂီယာနှုန်းဖန်ထက်ပိုမိုမြင့်မား 92-93% --- မှတက်ပါ! ဒါကြောင့် "ပလပ်စတစ်ကြည်လင်" ၏ဂုဏ်သတင်းရှိပါတယ်။
3. ၎င်း၏အလင်း (စိန်ကဲ့သို့), ပျော့အဆင်ပြေခြင်း, တောက်ပကြည့်!
4. ဒါဟာပလပ်စတစ်ထဲမှာထိပ်ဆုံးအဆင့်, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရာသီဥတုခုခံရှိပါတယ် Epic ပြင်ပတွင်။ မြင့်မားတဲ့အပူချိန်ကောင်းသောစွမ်းဆောင်မှု, ပုံပျက်အပူချိန်ဝန်းကျင် 96 ℃ ( 1.18MPa ) . ကောင်းသောရာသီဥတုခုခံ, အက်ဆစ်နှင့်အယ်လကာလီခုခံ, နေရောင်ခြည်နှင့်မိုးရွာရွာအောက်မှာထိတွေ့မှု၏အနှစ်အပြီးအဝါရောင်နှင့် Hydrolysis မရှိဖြစ်ရပ်ဆန်း။
5. Long ကစွမ်းဆောင်ရည်ဘဝကို: (ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို PS, AS, PP ကဲ့သို့) ကိုအခြားပစ္စည်းများနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်သုံးနှစ်ပိုရှည်စွမ်းဆောင်ရည်ဘဝ!
လေထုထဲတွင် 6. Excellent က Anti-အိုမင်းစွမ်းဆောင်ရည်: နမူနာကောစမ်းသပ်မှုကြောင့်စမ်းသပ်ပြီး: သဘာဝအလျောက်အိုမင်း4နှစ်အကြာ, , acrylic ထုတ်ကုန်ရဲ့အလေးချိန် နှစ်အကြာ, , ဆန့်၏ပြင်းထန်မှုနှင့်အလင်းထုတ်လွှတ်နိုင်စွမ်းအနည်းငယ်လျှော့ချ နှစ်အကြာ, , အရောင်အနည်းငယ်အဝါရောင်အဖြစ်ပြောင်းသွားသည် နှစ်အကြာ, , , ခုခံသိသာလျှော့ချ crazing သို့သော်ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သည်ခမည်းတော်အရာ၌တိုးမြှင့်နှင့်အခြားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှုနီးပါးမျှပြောင်းလဲမှု!
8. ဒါဟာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ & ထူးချွန်လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးလည်းစက်မှုစက်မှတဆင့်လုပ်ငန်းများ၌နိုင်, အပူကဖွဲ့စည်းနိုင်ပါတယ်။
9. acrylic လိုအပ်ပုံစံမျိုးစုံနှင့်ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးသို့လုပ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ခုထူးချွန် feature ကိုအထူမြင့်မားဒီဂရီနှင့်အတူင့်လင်းမြင်သာမြင့်မားဒီဂရီဆက်လက်တည်ရှိရန်ဖြစ်ပါသည်။
10. Lightweight, ပုံဖော်ဖို့လွယ်ကူစျေးပေါ။
11 acrylic ပစ္စည်းတောက်ပ၏သူမတူနိုင်တဲ့မြင့်မားတဲ့ဘွဲ့အဖြစ်အောက်ပါအားသာချက်ရှိပါတယ်: ကောင်းသောခိုင်မာခြင်း, လွယ်ကူစွာပျက်စီးဘဲ, repair; ဒါဟာဆောင်းကာလ၌အဘယ်သူမျှမ bit နဲ့ချမ်းအေးနှင့်အတူအပျော့ texture ရှိပါတယ်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်တွေ့ဆုံ, များစွာသောအရောင်များရှိပါတယ်။ acrylic နှင့်ဖွဲ့ထုတ်ကုန်လက်ရာမြောက်သော, ဒါပေမယ့်လည်းခံနိုင်ရည်မသာဖြစ်ကြသည်။
ဖော်ရွေ 12. ပတ်ဝန်းကျင်:
2) စွန့်ပစ်ပစ္စည်းပြန်လည်လွယ်ကူပြီးအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်, ပြန်သုံးဘို့ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
3) အမြင့် Recycle နှုန်းကိုခိုင်ခံ့စေပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအသိပညာတိုးဖြစ်ပါသည်
4) အဘယ်သူမျှမအန္တရာယ်ရှိသော monomer သို့မဟုတ်အနံ့ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။
5) အစားအသောက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေး, လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှမခို။
92-93% အထိအလင်းဂီယာ၏ကောင်းမွန်သောဒီဂရီ, လျော့နည်းအလင်းပြင်းထန်မှု: 13 စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနချွေတာရေး
စွမ်းအင်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ချွေတာ, အလင်းအိမ်, ပါဝါချွေတာရေးလျှော့ချ, လိုအပ်သည်။
အထူးလိုအပ်ချက်များအတွက်လုံခြုံဇုန်များတွင်တပ်ဆင်မှုအတွက်သင့်လျော်သော 14 ခိုင်ခံ့သောသက်ရောက်မှုကိုခုခံ, သာမန်ဖန်ခွက်ထက်တဆယ်ခြောက်ကြိမ်။
လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာအမျိုးမျိုးများအတွက်သင့်လျော်သော 15. ကောင်းသောလျှပ်စစ်အပူအသံကာကွယ်မှုစွမ်းဆောင်ရည်။
16. အလင်းအလေးချိန်, သာမန်ဖန်ခွက်၏တစ်ဝက်အလေးချိန်။
အခြားပစ္စည်းများကိုမှမတူနိုင်တဲ့တောက်ပ၏ 17 အရောင်အသွေးစုံသော, မြင့်သောဘွဲ့။
18. ခိုင်ခံ့ plasticity, လွယ်ကူသောတန်ဆာ။
19. လွယ်ကူမိုးရေသဘာဝကျကျသန့်ရှင်းတဲ့နိုင်, clean ရန်လွယ်ကူ, ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့။
ဆောင်းရာသီတွင်ဖန်ခွက်သို့မဟုတ်ကြွေထည်ပစ္စည်းအဖြစ်ဒီတော့ချမ်းအေးမရခံစား 20. ဖျ texture ။
အရောင် 21. တောက်ပ, အသက်ရှင်ခြင်း၏အရည်အသွေးအဘို့အများ၏တစ်ဦးချင်းစီလိုက်စားတွေ့ဆုံရန်။
ပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အပေါ်ယံပိုင်းများအတွက် 22. Excellent ကစွမ်းဆောင်ရည်သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပက်ဖြန်းအပေါ်ယံပိုင်းကနည်းပညာကိုအသုံးပြုလျှင်, ဒါဟာ acrylic ထုတ်ကုန်စံပြမျက်နှာပြင်အလှဆင်အကျိုးသက်ရောက်မှု & အလားအလာပေးနိုင်ဘူး။
လူမီနီယံ, ဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အတူကောင်းသောတည်ငြိမ်မှုနှင့်အတူအလားတူ 23. ကောင်းသည်းခံခြင်း, အများအပြားဓာတုပစ္စည်းများ၏တိုက်စားမှုခံနိုငျရနိုငျသညျ။
24. ပြည်တွင်းရေးအလင်းအိမ်မှသေးငယ်သောကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, အလင်းအိမ်၏ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း။
မီးမှခံနိုင်ရည် 25. အလိုအလြောကျလောင်ကျွမ်းခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်ငြိမ်းအေး၏အခမဲ့ဖြစ်သည်။
အဲဒီမှာ 26, ကွဲပြားခြားနားသော & မျိုးစုံစွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးမျိုးအရောင်နဲ့အမြင်အာရုံသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဖောက်သည်များ၏အမျိုးမျိုးသောလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်အနေ acrylic ပစ္စည်း။
သငျ့လျြောသောအပြောင်းအလဲနဲ့, အလှဆင်ခြင်းနှင့်ပုံနှိပ်ပြီးနောက် 27 အလွန့်အလွန်အမြင်အာရုံ Impact ။
acrylic display ကိုများနှင့်အခြားပစ္စည်းအကြားကွာခြားချက်ကဘာတွေလဲ? Glass ကို vs acrylic
Glass ကို vs acrylic
ဒါကြောင့်ဖန်ပစ္စည်းအပေါ်အများကြီးအားသာချက်ရှိပါတယ်အဖြစ်စက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် acrylic ပစ္စည်း, ဖန်ပစ္စည်းထက်ပိုမိုကျယ်ပြန်လျှောက်လွှာရှိပါတယ်။
1. အပြောင်းအလဲနဲ့၏ရှုထောင့်ခုနှစ်, acrylic ဖန်ထက်အများကြီးပိုပုံစံများနှင့်ပုံစံမျိုးစုံသို့လုပ်ငန်းများ၌နိုင်ပါသည်။
2. သူတို့နှစ်ဦးစလုံးပျက်စီးလွယ်သို့သော် acrylic ပစ္စည်းဖန်ထက် ပို. ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ကြသည်။ ဘယ်အချိန်မှာဖန်အားလပ်ချိန်, ကအလွယ်တကူလူတွေကိုထိခိုက်စေသည့်ချွန်ထက်ကိုအပိုင်းပိုင်းသို့ချိုး ဖျက်. , ကြီးမားတဲ့တုံးအပိုင်းပိုင်းသို့ acrylic လပ်ချိန်စဉ်နှင့်ပြည်သူများကိုထိခိုက်စေမည်မဟုတ်။ နှစ်ခုပစ္စည်းနှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်, တဦးတည်းအန္တရာယ်ကင်း acrylic ပစ္စည်းကြိုက်တတ်တဲ့။
အစားအသောက်တန်း, ဓာတုတည်ငြိမ်မှုများအတွက် 3. မြင့်သောဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှစ်ဦးစလုံး နှစ်အကြာ, , ရေနှင့်အတူပျော်ဝင်ဓာတုပစ္စည်းများယေဘုယျတိုက်စားမှုသည်းခံမဟုတ်ပါဘူး။
4. မြင်နိုင်အလင်း permeation နှစ်အကြာ, , ခရမ်းလွန် နှစ်အကြာ, , အလေးချိန်ဘုံဖန်၏ 1/2 ဖြစ်ပါတယ်။
92-93% အထိ 5. အလင်း permeation နှစ်အကြာ, , သာမန်ပွင့်လင်းပလပ်စတစ် (PS, AS, PVC etc) 80% ထက်သာအနည်းငယ်ပိုအလင်း permeation ရှိပါတယ်။
6. ဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်သာမန်ဆီလီကွန်ဖန်၏ 12 ~ 18 ကြိမ်ဖြစ်တယ်။
7. စက်မှုပြင်းထန်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်သာမန်ဆီလီကွန်ဖန်ထက် 10 ဆဖြစ်ပြီး နှစ်အကြာ, , လူမီနီယမ်နှင့်ဆင်တူခိုင်မာသော နှစ်အကြာ, , ထူးချွန်ရာသီဥတုခုခံခြင်းနှင့်အိုမင်းခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
8. အထူးထငျရှားလှပသောအလားအလာ နှစ်အကြာ, , polishing ပြီးနောက်ကြည်လင်ကဲ့သို့တောက်ပြောင်ပိုင်ဆိုင် နှစ်အကြာ, , alias ကို "ပလတ်စတစ် Crystal ဘုရင်မ" ။
PS vs acrylic
အဆိုပါ acrylic display နှင့်သည် PS ထိုးသွင်း display ကိုအကြား Differerence:
1. အဆိုပါ acrylic display ကိုသည် PS display ကိုထိန်သိမ်းထိုးသွင်းနှင့်မျက်နှာပြင်တောက်ပြောင်၏မြင့်မားသောဒီဂရီရှိပါတယ်, polishing ပြီးနောက်ကြည်လင်ကဲ့သို့တောက်ပြောင်ပိုင်ဆိုင်ထက်ပိုမိုပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ချစ်စရာကြည့် ,; ပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အပေါ်ယံပိုင်းအဘို့အ Excellent ကစွမ်းဆောင်ရည်, သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပက်ဖြန်းအပေါ်ယံပိုင်း workcraft ကိုအသုံးပြုလျှင်, acrylic ထုတ်ကုန်စံပြမျက်နှာပြင်အလှဆင်အားထုတ်မှု & အလားအလာပေးနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်အထူးလှပသောအလားအလာ unparalleled သိရသည်။
2. acrylic ဝန်ဆောင်မှုဘဝအနည်းဆုံးသုံးနှစ်ကပိုရှည်, PS ထက်အများကြီးပိုရှည်စွမ်းဆောင်ရည်ဘဝရှိပါတယ်။
3. အဆိုပါ acrylic display ကိုထိန်သိမ်းအရှင်မျှမှိုကုန်ကျစရိတ်ရာအရပ်ကိုယူလိမ့်မယ်, မှိုဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး, နှင့်၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအဆင်ပြေမည်သည့်အချိန်စိတ်ကြိုက်နိုငျသညျ။
4. သို့သော် acrylic display ကို PS ထိုးသွင်း display ကိုထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားယူနစ်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
5. PS display ကိုထိန်သိမ်းထိုးသွင်းယူနစ်စျေးနှုန်းအများကြီးစျေးသက်သာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သူကအစအဦး၌အမှိုဖွင့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဒါ့အပြင်ပေးဆောင်ဖို့မှိုကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။
6. acrylic ကထူးချွန်ရာသီဥတုခုခံရှိပါတယ်, ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အောက်မှာအများကြီးပိုမိုအားကောင်းခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
7. acrylic အများကြီး Anti-ခရမ်းလွန်စွမ်းဆောင်မှု, Anti-အိုမင်းစွမ်းဆောင်မှုရှိပါတယ်။
8. အနိမ့်အပူချိန်အောက်မှာကွဲအက်, ပျက်စီးလွယ်သောနှစ်ဦးစလုံး။
9. PS ကြီးမားသောအရေအတွက်နှင့်အတူထုတ်လုပ်မှုများအတွက်သင့်လျော်သောပိုကောင်းဆေးထိုးစွမ်းဆောင်မှုရှိပါတယ်။ ထုတ်ကုန်များအတွက်အသေးစားကျုံ့မှုနှုန်း, အရွယ်အစားတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
အဝါရောင်နှင့်မှုန်ဝါးစေရန်ဖွင့်ရန်လွယ်ကူနေရောင်ခြည်အောက်မှာထိတွေ့ပြီးနောက် 10. PS ။
PP vs acrylic
2. acrylic ဝန်ဆောင်မှုဘဝအနည်းဆုံးသုံးနှစ်ကပိုရှည်, PP ထက်အများကြီးပိုရှည်စွမ်းဆောင်ရည်ဘဝရှိပါတယ်
4. သို့သော် acrylic display ကို PP ထိုးသွင်း display ကိုထက်အများကြီးပိုမိုမြင့်မားယူနစ်ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
5. PP display ကိုထိန်သိမ်းထိုးသွင်းယူနစ်စျေးနှုန်းအများကြီးစျေးသက်သာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သူကအစအဦး၌အမှိုဖွင့်ရန်လိုအပ်ကြောင်းဒါ့အပြင်ပေးဆောင်ဖို့မှိုကုန်ကျစရိတ်ရှိပါတယ်။
6. PP acrylic ကဲ့သို့ခိုင်မာတဲ့နဲ့ Hard ပျော့မဟုတ်ဘူး။
7. PP ရဲ့မြင်သာ arylic နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လို့မရပါဘူး။
8. acrylic ကထူးချွန်ရာသီဥတုခုခံရှိပါတယ်, ပြင်ပပတ်ဝန်းကျင်အောက်မှာအများကြီးပိုမိုအားကောင်းခံနိုင်ရည်ရှိပါတယ်။
9. acrylic အများကြီး Anti-ခရမ်းလွန်စွမ်းဆောင်မှု, Anti-အိုမင်းစွမ်းဆောင်မှုရှိပါတယ်။
အဆိုပါ acrylic display ကိုပု PETG ထိန်သိမ်းထက်ပိုမိုပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ချစ်စရာကြည့်နှင့်မျက်နှာပြင်တောက်ပြောင်၏မြင့်မားသောဒီဂရီရှိပါတယ်, polishing ပြီးနောက်ကြည်လင်ကဲ့သို့တောက်ပြောင်ပိုင်ဆိုင် ,; သင့်လျော်သောပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပက်ဖြန်းအပေါ်ယံပိုင်း workcraft ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ပုံနှိပ်ခြင်းသို့မဟုတ်အပေါ်ယံပိုင်းအဘို့အ Excellent ကစွမ်းဆောင်ရည်, က acrylic ထုတ်ကုန်စံပြမျက်နှာပြင်အလှဆင်အကျိုးသက်ရောက်မှုပေးနိုင်ဘူး။ ဒါကြောင့်မတူနိုင်တဲ့ & အထူးလှပသောအလားအလာရှိပါတယ်။
PETG '' s ကိုဆန့်ကျင်သက်ရောက်မှုစွမ်းဆောင်ရည် 1-3 ခိုင်ခံ့စေ၏ acrylic ၏ကြိမ်ဖြစ်တယ် , နှင့်သာမန် acrylic3~ 10 ကြိမ်။ PETG: ခက်, Anti-သက်ရောက်မှုများနှင့်ခံနိုင်ရည်ပင်အပူချိန်၏ပတ်ဝန်းကျင်အောက်မှာထက်နည်း -40 ℃ ။ PETG ထုတ်ကုန် fabricatio အတွက်လုံလောက်သောခံနိုင်ရည်ရှိ ဎ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အသုံးပြုမှု။ ဒါဟာထိရောက်စွာခြိုးဖောကျကိုရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
PETG သာ. မြတ်သောဖွဲ့စည်းစွမ်းဆောင်ရည်, ပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အလှဆင်ဘို့လွယ်ကူသောပုံမှန်အပူချိန်အောက်မှာကွေးပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမအဖြူ, အအေး Bende ပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမအဖြူ, အဘယ်သူမျှမအက်ကွဲရှိပါတယ်။
PETG မီးခံနိုင်ရည်, ကမီးလောင်ပေါက်ကွဲလွယ်တဲ့ပိုင်ဘူး, မီးလောင်သောမကူညီဘူး, ပစ္စည်း, acrylic ထက်ပိုပြီးအန္တရာယ်ကင်းကိုမီးရှို့ပြီးနောက်ထုတ်လုပ်မျှအန္တရာယ်ရှိသောပစ္စည်းဥစ္စာကိုတည်ဆောက်ခြင်း၏စံကိုက်ညီ။
စတာတွေဆန့်ကျင်ခရမ်းလွန်, ကျယ်ပြန့်ပြင်ပတွင်သို့မဟုတ်မိုးလုံလေလုံဆိုင်းဘုတ်တွင်အသုံးပြုနိုင်, ပစ္စည်းကိရိယာများများအတွက်ရောင်းချခြင်း, Display ကိုသိမ်းတန်း, အဆောက်အဦးအပြင်ပစ္စည်းကိရိယာများ, အရောင်းပြခန်း, အကာအကွယ် panel ကို၏ပွိုင့်, ပြဇာတ်ဘူတာရုံ panel ကနေ, စက် panel ကတော့အရောင်း
ဒါဟာအိုကဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်ပြီးဖြစ်သောပလပ်စတစ်တစ်မျိုး, C, H ကို မှလွဲ. အခြားအဓာတုဒြပ်စင်များမဟုတ်, thermoplastic ပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ စွန့်ပစ်, သူတို့ကရေနဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့မှလှည့်ပါလိမ့်မည်ပြီးတဲ့နောက်ဒီပစ္စည်းကိုဖန်ဆင်းထုတ်ကုန်များ, ဒါဟာအစပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းခြင်းမရှိဘဲပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
PETG acrylic ထက်ပိုစျေးကြီးသည်, ဒါပေမယ့် PC ကိုထက်စျေးနှုန်းချိုသာခြင်းနှင့် acrylic ထက်ပိုမိုတာရှည်ခံ။
PETG FDA ကအစာအဟာရအဆက်အသွယ်စံကိုက်ညီပါကအစားအစာ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များစသည်တို့ကိုအတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါကအစားအစာအမျိုးမျိုး၏ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ကွန်တိန်နာထုပ်ပိုးအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ...... ထိုသို့ lipids နှင့်ဓာတုပစ္စည်းတွေအများကြီးသည်းခံတတ်ခြင်း, တိုက်စားမှုမှခံနိုင်ရည် စသည်တို့ကိုအက်ဆစ်, alkaline များနှင့်အဆီများ, အဲဒါကိုအစားအစာနှင့်လူများအတွက်ပိုပြီးငြိမ်းချမ်းလုံခြုံတဲ့ပစ္စည်းအဖြစ်မှတ်ယူသည်။
filter များ, eustachian ပြွန်, ပိုက်၏ connector ကို: PETG ကျယ်ပြန့်မွှေးကြိုင်ပုလင်းနှင့်၎င်း၏ lids, အလှကုန်ပုလင်းနှင့်၎င်း၏ lids, lipstics ၏ပြွန်, အလှကုန်သေတ္တာများ, deodorizer ကွန်တိန်နာ, ကလေးအမှုန့်ပုလင်း, eyeliner ထုပ်, etc နှင့် PETG ဆေးထိုးထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုထားသည် , ပန့်များ, ညှပ်နှင့် Dialysis ပစ္စည်းကိရိယာများစသည်တို့ကိုလူတို့အဘို့အမြင့်ဆုံးလုံခြုံလိုအပ်ချက်များကိုလိုအပ်သည့်ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုခွက်များ, သုပ်ပန်းကန်, saltcellar, ငရုတ်ကောင်း shaker, ဘဏ်ကဒ်, ရေကွန်တိန်နာအဖြစ်အိမ်ထောင်စုထုတ်ကုန်။
1. PVC, ပျော့ပြောင်းပြီးစျေးပေါနှင့်များသောအားဖြင့်ပိုမိုပါးလွှာသည်။
2. Transparent PVC အထူအများအားဖြင့် 3mm ထက်မပိုဖြစ်ပါတယ်။
3. PVC ရဲ့မြင်သာ arylic နှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်လို့မရပါဘူး။
4. PVC ဖော်ရွေလုံခြုံနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်မဟုတ်အစားအစာမဟုတ်ပါဘူး။
5. PVC များသောအားဖြင့် display ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် acrylic အဆောက်အဦများနှင့်အတူအသုံးပြုသည်။
MDF vs acrylic
အဆိုပါအလားအလာ, အင့်လင်းမြင်သာခြင်း, texture စသည်တို့ကို: ကဏ်ဍအပျေါလုံးဝ differerent
Wood က vs acrylic
များစွာသောရှုထောင့်မှာရှိတဲ့ကွဲပြားခြားနားပေမယ့်အဓိကအားဖြင့် acrylic စွမ်းအင်ချွေတာရေး, ပတ်ဝန်းကျင်အကာအကွယ်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်သစ်သားပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
စာရွက်သတ္တု vs acrylic
ကွာခြားချက်များအဓိကအားဖြင့်င့်လင်းမြင်သာ, Outlook, ကြာရှည်ခံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများအဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်။
ကြွေ vs acrylic
အစဉ်အလာကြွေပစ္စည်းနှင့်အတူနှိုငျးယှဉျ acrylic မတူနိုင်တဲ့မြင့်မားတဲ့တောက်ပြောင်ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်အောက်ပါအကျိုးကျေးဇူးရှိပါတယ်: ကောင်းမွန်သောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, အလွယ်တကူကျိုးပဲ့လွယ်သော, မပြုပြင်ကြလိမ့်ရန်လွယ်ကူသာသွားတိုက်ဆေးအနည်းငယ်နဲ့အပျော့အမြှုပ်ကိုသုံးလတ်ဆတ်ဖြစ်ဖို့သန့်ရှင်းဆေးကြောသန့်စင်နိုင်ပါတယ်။
soft texture မဟုတ်ဘဲရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌အအေး feeling ။
လျှက်ရှိကြောင်း display နှင့်ထိုးသွင်း display ကိုအကြားကွာခြားချက်ကဘာတွေလဲ?
လျှက်ရှိကြောင်း display ကိုမှိုဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး, နှင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် configuration အပိုတာဝန်ခံမပါဘဲအခါတိုင်းစိတ်ကြိုက်နိုင်, အရှင်ကထိုးသွင်းသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှိုကုန်ကျစရိတ်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏနှင့်လျှက်ရှိကြောင်း display ကိုထိုးသွင်းနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ယင်း၏ featured ကောင်းသောအလားအလာရှိပါတယ်ကယ်တင်မည် သူမြားကို။ လူများတို့သည်မှိုကုန်ကျစရိတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်ကြပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းဆေးထိုးဘို့အသင့်လျော်မဟုတျပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်လူများမော်ဒယ်အများအပြားအရေအတွက်မှထုတ်လုပ်ချင်ကြပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်လူတွေကိုသစ်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အတူစျေးကွက်ကြိုးစားရန်လို acrylic လျှက်ရှိကြောင်းလိုက်တဲ့အခါ Display ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ထိုးသွင်းကုန်ပစ္စည်းများကိုမှိုကုန်ကျစရိတ်သို့မဟုတ်ကြီးမားသောအရေအတွက်၏တစ်ထုတ်လုပ်မှုအလို့ငှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဝယ်လက်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်တဦးတည်းမော်ဒယ်များအတွက်မှိုအဖွင့်စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်မဆိုကြာကြာပြုပြင်ထားသောသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲသွားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ သင်တစ်ဦး "ပိုကောင်း" ဒီဇိုင်းနှင့်အတူအခြားမော်ဒယ်ရှိသည်ဖို့ချင်လျှင်, သင်သည်နောက်တဖန်အသစ်တခုမှိုဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ် acrylic လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများလျှက်ရှိကြောင်းနှုနျးမှရပါလိမ့်မယ်။
လျှက်ရှိကြောင်း display ကိုလုံလောက်အောင်ခိုင်မာတဲ့လား?
အကယ်စင်စစ်သင်သည်ထိုသူတို့ပစ်သို့မဟုတ်ပေါ်မှာမတ်တပ်ရပ်, ဒါမှမဟုတ်သတ္တုလုပ်ကွက်ကိုင်ဖို့ acrylic Display ကိုအသုံးမပြုလျှင်။
လျှက်ရှိကြောင်း acrylic display ကို၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်အားသာချက်ကဘာလဲ?
လျှက်ရှိကြောင်း display ကိုမှိုဖွင့်ရန်မလိုအပ်ပါဘူး, နှင့်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် configuration အပိုတာဝန်ခံမပါဘဲအခါတိုင်းစိတ်ကြိုက်နိုင်, အရှင်ကထိုးသွင်းသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှိုကုန်ကျစရိတ်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏနှင့်လျှက်ရှိကြောင်း display ကိုထိုးသွင်းနှင့်အတူနှိုင်းယှဉ်ယင်း၏ featured ကောင်းသောအလားအလာရှိပါတယ်ကယ်တင်မည် သူမြားကို။ လူများတို့သည်မှိုကုန်ကျစရိတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံချင်ကြပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းဆေးထိုးဘို့အသင့်လျော်မဟုတျပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်လူများမော်ဒယ်အများအပြားအရေအတွက်မှထုတ်လုပ်ချင်ကြပါဘူး, ဒါမှမဟုတ်လူတွေကိုသစ်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အတူစျေးကွက်ကြိုးစားရန်လို acrylic လျှက်ရှိကြောင်းလိုက်တဲ့အခါ Display ရဲ့အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောအလှကုန်, ဆေးဝါးများ & ကျန်းမာရေးအဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသောလိုင်းများများအတွက် acrylic display တွေ၏စီးရီး (pusher စနစ်နှင့်လည်းထိုကဲ့သို့သော MDF PC, PETG, စာရွက်သတ္တုစသည်တို့ကဲ့သို့အချို့နဲ့အခြားပစ္စည်းများနှင့်အတူသူတို့ထဲကအများစုဟာ) ၏တွေအများကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါလိမ့်မယ် ထုတ်ကုန်က e-စီးကရက်, အချိုရည် & ဖျော်ယမကာ, နေ့စဉ်စားသုံး & အိမ်ထောင်စုပစ္စည်းများစသည်တို့ကို, ကြော်ငြာများ၏အသုံးပြုမှုများအတွက်, ပြသခြင်းနမူနာ, အရောင်းမြှင့်တင်ရေးစသည်တို့
ကျနော်တို့မတ်လ 24-26 စဉ်အတွင်းအမေရိကန်အတွက် Las Vegas မှာ Globalshop 2015 တက်ရောက်ရန်လိမ့်မယ် ကြိမ်မြောက် 2015 ။
ဘယ်လို workcraft လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. :
ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ် drawing စာရင်းစစ်→ပစ္စည်းများဝယ်ယူမှု→လေဆာ→စစ်ဆေးရေး→ထုပ်ပိုး→တင်ပို့တပ်ဆင်→ gluing →→ပိုးမျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်းကွေး→ Mills →ပိုလန်→အပူဖြတ်တောက်
မြန်နှုန်းမြင့် Router က 2
မျက်နှာပြင် planer 1
Flame ဟာချောစက် 2
ဇယား2ကိုမြင်လျှင်
Precision ခြောက်သွေ့မီးဖို 1
Ultrasonic ဂဟေဆော်စက် 1
သင်သည်မည်သည့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် display ကိုထောက်ပံ့သလား?
ဟုတ်ပါတယ်, Loreal, Kaufland, Rimmel, Sally Hanson, Napolean Perdis, K-Mart မှာ, Big-W, Watson, အမြဲစိမ်းစသည်တို့ကို
သငျသညျ QC ဌာနရှိပါသလား
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့ QC ဌာန,3QC ရှိသည်။
သငျသညျ R & D ဌာနရှိပါသလား
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့,3ဒီဇိုင်နာများ R & D ဌာနရှိသည်။
ဟုတ်ကဲ့ကျနော်တို့အများကြီးလိမ္မော်ရောင်ထုတ်ကုန်ရှိသည်။ လစဉ်လတိုင်းကျွန်တော်သစ်ကိုဒီဇိုင်းနှင့်အတူအနည်းဆုံးအား 2-3 ထုတ်ကုန်အသစ်တွေဖွံ့ဖြိုးပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်းအဖွဲ့ကိုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်အီးမေးလ်, skype တို့ကတိုက်ရိုက်သူတို့ကိုမေးဖို့ ကျေးဇူးပြု. , or telephones!
သူတို့ကသငျသညျ prompt ကိုနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အကြောင်းပြန်ပေးလိမျ့မညျ!